စစ်နှင့် ဆင်းရဲခြင်း ~ Htet Aung Kyaw
1:07 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
The Voice Daily, 06-06-2016.
ပြည်တွင်းစစ် (လက်နက်ကုိုင် ပဋိပက္ခ) နှစ် ၆၀ ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ‘’စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး’’ ဆုိုပြီး တွဲသုံးတာကို မကြာခဏကြားရလေ့ရှိပေမဲ့ ‘’စစ်နှင့်ဆင်းရဲခြင်း’’ ကုို တွဲသုံးတာ မတွေ့မိသလောက်ပါပဲ။ တကယ်တော့ စစ်ပွဲနှင့်ဆင်းရဲခြင်းဆုိုတာ တုိုက်ရုိုက်ဆက်စပ်နေပြိး ငြိမ်းချမ်းရေးက စစ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုိုချင်ရင် စစ်ပွဲတွေရပ်ရမယ်ပေါ့။ ဒါဖြင့် ဆင်းရဲခြင်းကကော စစ်ပွဲတွေရပ် လုိုက်ရင် နည်းနည်းသက်သာလာလေ မလား။
စစ်ပွဲရပ်ရုံနဲ့ ဆင်းရဲခြင်းသက်သာလာ မလာ အသေအချာမပြောနုိုင်ပေမဲ့ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ နုိုင်ငံအားလုံး ဆင်းရဲနေတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ မြန်မာနုိုင်ငံမှအပ စစ်ဖြစ်နေတဲ့နုိုင်ငံ မရှိတော့ပါ။ အရှေ့အလယ်ပုိုင်းနဲ့ အာဖရိကနုိုင်ငံတချုို့မှာတော့ အခုချိန်အထိ တုိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲ။ ချမ်းသာပြီး ဖွံဖြိုးတုိုးတက်နေတဲ့ နုိုင်ငံတွေကိုကြည့်လုိုက်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နောက်ပုိုင်းကစပြိး ဘာစစ်ပွဲမှ မရှိတော့ပါ။
စစ်ပွဲမရှိတော့ စစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ မိအေး နှစ်ခါနာဆုိုသလုို စစ်ဆုိုတာက နုိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် ဆုံးရှုံးရုံတင်မက၊ လူ့အသက်တွေလည်းသေကျေ၊ အဆောက်ဦတွေလည်းပျက်စီး၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလည်းကျဆင်း၊ သစ်တောတွေလည်းပြုန်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စသဖြင့် အားလုံးထိခုိုက်တဲ့ အတွက် ကောင်းတာဆုိုလုို့ ဘာမှ ပြစရာမရှိပါ။
ဆင်းရဲခြင်းလုို့ပြောတဲ့အခါမှာ သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်း၊ စစ်ပွဲကြောင့် ဆင်းရဲခြင်း၊ အစိုးရ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လုို့ဆင်းရဲခြင်း စသဖြင့် အမျိုးမျုိုးရှိနုိုင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားတာကတော့ တရက်ကုို အမေရိကန်တဒေါ်လာခွဲအောက်သာဝင်ငွေရှိရင် ၀င်ငွေနည်းတဲ့ ဆင်းရဲသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ တယ်။ ဒါက သာမန်ဆင်းရဲခြင်း။ အကြွင်းမဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆုိုတာ ရှိသေးတယ်။ စားစရာ အစာမရှိ၊ သောက်စရာ ရေမရှိ၊ ၀တ်စရာ အ၀တ်မရှိ၊ နေစရာ အမုိုးအကာမရှိ၊ ကုစရာ ဆေးဝါးမရှိ၊ ဘာမှကိုမရှိပဲ ဒုက္ခရောက်နေ သူတွေကို ဆုိုလိုိုတာပါ။
မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ဒီဆင်းရဲခြင်း ၂ မျိုးစလုံးရှိနေပါတယ်။ ဆင်းရဲရခြင်း နောက်ခံအကြောင်းရင်းကလည်း ၃ မျိုးစလုံးနဲ့ ပြည့်စုံသလုို ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးဒဏ်ကုိုတော့ ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နုိုင်လုို့ ထားလုိုက်တော့။ ကျနော်တုို့လုပ်နုိုင်တာက လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် စစ်ပွဲတွေ ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်း၊ အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လုို့၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများလွန်းလုို့ဆင်းရဲခြင်းကိုတော့ အခု လူထုမဲနဲ့တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ကုစားဖုို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်။
ပထ၀ီအနေအထား နည်းနည်းဝေးတဲ့ အရှေ့အလယ်ပုိုင်းနဲ့ အာဖရိကဖက်က စစ်ပွဲအခြေအနေကုိုထား လုိုက်ပါ။ နှစ် ၆၀ ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မရှိတဲ့ (စစ်တပ်က မကြာခဏ အာသိမ်းလေ့ရှိသည့်တုိုင်) ထုိုင်းနုိုင်ငံကိုပဲ ဥပမာထားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ စစ်ပွဲတွေကြောင့် မြန်မာနုိုင်ငံ ဘယ်လိုကျန်ခဲ့သလဲဆုိုတာ လူတုိုင်းသိနုိုင်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအားကောင်း စဉ်က စခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေ၊ ၁၉၇၀ ၀န်းကျင် ပြည်သူ့ ပြည်ချစ်ပါတီခေတ် စစ်ပွဲတွေကိုထားလုိုက်ဦး။
၁၉၈၈ နောက်ပုိုင်း နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်းမှာတင် ထုိုင်းနဲ့ မြန်မာ ဘယ်လောက်အထိ ကွာထွက်သွားသလဲ။ ဒီနေ့ တပ်မတော်မှာ တာဝန်ယူနေသူတွေ၊ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာ တာဝန် ယူနေသူတွေ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ နှစ် ၆၀ ကျော်စစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ နှစ်ဖက်စစ်သား၊ ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရပြီး မသန်စွမ်းဖြစ်သွားတဲ့ နှစ်ဖက်စစ်သား ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပြီလဲ။ ပေါ်တာဆွဲခံရ လုို့ဖြစ်စေ၊ ၀မ်းစာရှာရင်းမုိုင်းနင်း မိလုို့ဖြစ်စေ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရတဲ့အရပ်သား ဘယ်လောက်တောင်ရှိ နေပြီလဲ။ အခုလုို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်နေချိန်မှာ ဒီလုိုစာရင်းဇယားတွေပြုစု ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ်။
ဒါက လူသားအရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတခုတည်းသာရှိပါသေးတယ်။ တုိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေ၊ တုိုင်းပြည်အရင်း အမြစ်တွေကော နှစ် ၆၀ ကျော်အတွင်း ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့သလဲ။ တပ်မတော်ဖက်ကသုံးတဲ့စာရင်း တွေတော့ စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ နုိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်စာရင်းထဲမှာ ရှိမယ်လုို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် အတုိုက်အခံ လက်ကုိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံဖက်က သုံးတဲ့စရိတ်ကော ဘယ်မှာရှာဖွေနုိုင်မလဲ။ ပျောက်ကျားစစ်ကိုအခြေခံတာ မုို့လုို့ အစိုးရတပ်လုိုမျိုး စစ်ရုံးချုပ်မှာ စာရင်းဇယား သိမ်းထားနုိုင်ဘွယ်မရှိပါ။
ဒါပေမဲ့ လက်ကုိုင်အဖွဲ့မျိုးစုံထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်စပ်တကျောမှာ သစ်တောတွေမရှိတော့ပါ။ ခဲမုိုင်း၊ ကျောက်မုိုင်း၊ ရွှေမုိုင်းတွေလည်း တူးလုို့ကုန်သလောက်ရှိနေပါပြီ။ သူပုန်တပ်မှာ အစိုးရတပ်လုို နုိုင်ငံတော်က ဘတ်ဂျက်ချပေးတာမရှိတော့ ကိုယ်နယ်ထဲရှိတာကိုရောင်းချပြီး လက်နက်မ၀ယ်ရင် ဘာနဲ့သွားတုိုက်မလဲ။ သူပုန်တွေကိုလည်း အပြစ် ပြောလုို့မဖြစ်ပြန်ဘူး။ သူတုို့ကအမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးအတွက် တုိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေ၊ သူ့နယ်သူ ကာကွယ်နေသူတွေ၊ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်ကို လာရောက် ကျုးကျော်တုိုက်ခိုက်နေသူတွေမဟုတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ‘’စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ပထမ ဆုံးကျဆုံးသူဟာ အမှန်တရားပါပဲ’’ လုို့ အဆုိုရှိတဲ့အတုိုင်း စစ်ပွဲတခုမှာ ဘယ်သူမှန်ပြီး ဘယ်သူမှားတယ်လုို့ ပြောဖုို့ခက်ပါတယ်။ ကုိုယ်က သူ့ကုိုမသတ်ရင် သူ့က ကုိုယ့်ကုိုပြတ် သတ်မှာမုို့ လက်ဦးအောင်အရင်သတ်ရင်းနဲ့ အပြန်အလှန်သတ်တဲ့ဇတ်လမ်းက အခု ၂၁ ရာစု အလယ်ပုိုင်းရောက်ခါနီးတဲ့အထိ မြန်မာ့ မြေပေါ်က မပျောက်နုိုင်သေးပါ။
မြန်မာတွေအချင်းချင်း အဲဒီလုိုသတ်ဖြတ်နေချိန်မှာ အိမ်နီးချင်းထုိုင်းနဲ့ တရုတ်တွေ ဘာလုပ်နေသလဲ။ သူပုန်နယ်က ထွက်လာတဲ့ သစ်တွေ၊ တခြားသံယံဇာတတွေ (တချို့နေရာတွေဆုို အစိုးရတပ်ကလည်း ရောင်းပါတယ်) နဲ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်သူတချို့ကဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်မရှိတဲ့ သူတို့နုိုင်ငံတွေမှာ စစ်စရိတ်မကုန်တဲ့အတွက် တုိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကုို နှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း ကောင်းကောင်း လုပ်ပြနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ဆောက်ရေးအကျုိုးဆက်နဲ့ တုိုက်ခုိုက်ရေးအကျိုးဆက်ကုို သိချင်ရင် သံလွင်နဲ့ သောင်ရင်းမြစ် တကျောကုို သွားကြည့်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း စတင်စုိုက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းသစ်တောတွေ ထုိုင်းဖက်ကမ်းမှာ စိမ်းစိမ်းစိုစို။ မြန်မာဖက်မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀ ကျော်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်းသစ်နဲ့ တခြားသစ်မာအားလုံးပြောင်သွားလုို့ တောင်ကတုံးတွေပဲကျန်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါက စစ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ထုိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က တုိုင်းပြည်ရဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေပါ။ ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွါးရေးဆီချီတက်နေတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်ဖက်ကို သွားကြည့်ဦးမလား။ သစ်တောနဲ့ သံယံဇာတတွေ ထုိုင်းဖက်မှာလုိုပဲ ပြုန်းတီးနေမယ်ဆုိုတာ သံသယရှိစရာမလုိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပုိုထူးတာက စစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒဏ်ရာအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒဏ်ရာကုိုပါ အပုိုဆု ရလုိုက်ပါသေးတယ်။ ဘိန်းနဲ့မူးယစ်ဆေးဟာလည်း ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တခုလုို့ဆုိုရင် ငြင်းမဲ့ သူမရှိဘူးထင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ နောက်ထပ် ထုတ်ကုန်တခုကတော့ နယ်စပ်တကျောမှာ မျိုးဆက် ၃ ခုစာလောက် ဆုံးရှုံး ခံနေရတဲ့ အင်အားတသိန်းကျော်ရှိ ဒုက္ခသည်တွေပါပဲ။ ၁၉၈၀ ပြည်လွန်နှစ်တွေကနေ အခုထိဆို နှစ် ၃၀ ကျော်နေပြီ။ တနည်းအားဖြင့် ဒီစခန်းမှာမွေးသူတောင် အခု အသက် ၃၀ ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုတိယ မျိုးဆက်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ သူတုို့သားသမီးက တတိယ မျိုးဆက်ပေါ့။ (ဒါဟာ ထုိုင်းနယ်စပ်က အခြေ အနေကိုသာပြောထားခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့ တဲ့ ၅ နှစ်တာ အစိုးရခေတ်မှာ ထပ်ပေါ်လာတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ ကချင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက ဒုက္ခသည်စာရင်း မပါသေးပါ)။
ဒါက နယ်စပ်ကအခြေနေ။ ထုိုင်းနယ်မြေထဲအထိ ၀င်ပြီးကြည့်ဦးမလား။ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ သန်းကျော်အထိ ရှိနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၈၈ မတုိုင်ခင်က ထုိုင်းမှာအလုပ်ထွက်လုပ်သူဆုိုတာ နယ်စပ်ဒေသက ဆင်းရဲသားတွေ လောက်သာရှိပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလုိုမဟုတ်တော့ ပြည်နယ်-တုိုင်း ၁၄ ခုစလုံးရှိ မြို့နယ်တုိုင်းကနေ ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပြီး လွတ်ထားတဲ့အတုိုင်း ထုိုင်းမှာအလုပ်သွား လုပ်နေသူမရှိတဲ့ မြို့နယ်ဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ အဲဒီ အလုပ်သမားတွေပုို့လုိုက်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ ဒီနေ့ မြန်မာ့ ကျေးလက်ဒေသတွေရဲ့ စီးပွားရေးကိုလည်ပတ်နေတယ်လုို့တောင် ပြောနုိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆုိုရင် စစ်ပွဲနှင့်ဆင်းရဲခြင်း တုိုက်ရုိုက်ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက် တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ လက်ခံလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါက နယ်စပ်က ဥပမာတွေပဲရှိပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကာလ အတွင်း ပြည်တွင်းမှာ ဆုိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတဲ့ လယ်ယာမြေသိမ်းမှုတွေ၊ စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး စီးပွားရှာတဲ့ ခရုိုနီစီးပွါးစနစ်ပေါ်လာမှုတွေကုိုကော စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်လုို့ပြောရင် ဘယ်သူငြင်းမလဲ။ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ နုိုင်ငံတုိုင်းမှာ လက်နက်ကုိုင်တပ်တွေသြဇာကြီးတာ သဘာဝပါ။ စစ်တုိုင်းမှုးက ပြည်နယ်-တုိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ထက် ပုိုသြဇာရှိတာ လူတုိုင်းသိပါတယ်။ ဒီတော့ ဗဟုိုရော၊ ဒေသဆုိုင်ရာရော ရှိသမျှစစ်အရာရှိ တွေနဲ့ပေါင်းပြီး တုိုင်းပြည်ကုို စစ်ကွက်ချသလုို ခွဲတန်းချ ဝေစားခဲ့တာ မထူးဆန်းပါဘူး။
ထားလုိုက်တော့။ အခုတော့ ဒါတွေ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ကနေ ဒီမုိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေး ခေတ်ဆီ ချီတက်နေပါပြီ။ ဒါဖြင့် ဒီဆင်းရဲခြင်းကို ဘယ်လုိုကုစားမလဲ။ စစ်ပွဲတွေမရပ်ပဲနဲ့တော့ ဆင်းရဲခြင်းကို ကုစားဖုို့ မဖြစ်နုိုင်ပါ။ စစ်ပွဲကုိုမရပ်ပဲ ဆင်းရဲခြင်းကို ကုစားမယ်ဆုိုရင် ‘’သမင်းမွေးရင်းကျားစားရင်း’ ဆုိုတဲ့ စကားပုံအတုိုင်း ယာဖက်လက်ကထူထောင်၊ ဘယ်ဖက်လက်က ပြန်ဖျက်ဆီးနဲ့ ရှေ့ကုိုမတက်နုိုင်ပဲ အရင် အစိုးရခေတ်ကလုိုပဲ လုံးချာလည် နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီလုိုထူတောင်တဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းအားအပြင် နုိုင်ငံတကာအကူအညီလည်းလုိုတယ်လုို့ ဝေဖန်ဆန်းစစ် သူတွေက ဆုိုပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တုိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် နုိုင်ငံတကာဖက်က ကူညီပေးတဲ့အပြင် စစ်ပွဲရပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပါ အကူအညီပေး နေတဲ့အတွက် တခြားနုိုင်ငံတွေထက် ပုိုသာသွားနုိုင်တယ်လို့တောင် ဆိုနုိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း ‘’သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း’’ ကုိုပဲ ဥပမာပြန်ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲမရပ်ပဲ ဆင်းရဲခြင်းကုိုကုစားဖုို့မဖြစ်နုိုင်သလုို လာဘ်စားမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုမရပ်ပဲလည်း ဆင်းရဲခြင်းကို ကုစားလုို့မဖြစ်နုိုင်ပါ။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မကြည့်ပါနဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရသက်တန်းအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရေးအတွက် နုိုင်ငံတကာက အကူအညီ ဘယ်လောက်ပေးခဲ့သလဲ။ အဲဒီအကူအညီတွေ အခု ဘယ်မှာလဲ။ ၂၀၁၂ ကနေ ၂၀၁၅ နှစ် ကုန်အထိ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ ရလာဒ်က ဘယ်မှာလဲ။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ စစ်ပွဲရပ်တာ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရပ်တာအပြင် ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖုို့လည်း လုိုပါသေးတယ်။ ဒီလုိုဖြစ်လာစေဖုို့အတွက် မျိုးဆက် ၃ ခုစာလောက် ပျက်စီးနေတဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်တွေကို ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ဖုို့လုိုပါတယ်။ ဒီအတွက် စစ်သုံးစရိတ်လျော့ချပြီး ပညာရေးနဲ့ ကျမ်းမာရေးဖက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတုိုးမြင့်ဖုို့လုိုပါတယ်။ စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအစား လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဖက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပုိုလုပ်ဖုို့လုိုလာပါတယ်။
ဒီလုို တုိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကုို စတင်ဖေါ်ဆောင်နုိုင်ဖို့အတွက် ပထမ ဆုံးလှမ်းရမဲ့ ခြေလှမ်းကတော့ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်ဆုိုင်းရေးနဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေ ချက်ချင်းပပျောက်အောင် လုပ်ရေးပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။ ။
June 7, 2016 at 12:50 AM Reply
Hi Brother, I would like to excerpt and repost it on my Blog. www.gfmmyanmar.com brother - for non-profit purpose.